Mpanamboatra charger LED ambongadiny sy mpamatsy | Sheerfond
Paramètam-pamokarana Model No. X-2 Output 5V 2A fampidirana AC90-240V Teknolojia fanontana LED miloko fotsy ho an'ny fanontana sary Gr Letterpress, fanontam-pirinty fampiasana UV Scenario hetsika fampiroboroboana, fiofanana sy fananganana ekipa, fanomezana soa, fiverenana any an-tsekoly / fizarana diplaoma, fanomezana asa vaovao , Fanomezana Tradeshow, Fanomezana "Misaotra", Asa hafa Fitaovana ABS, PC Brand Sheerfond Logo Fanontana: Custom Logo Design Customised Prints Colour C ...
Model No. X-2
Fivoahana 5V 2A
Loko LED fotsy
Teknolojia fanontana ho an'ny sary
Fanontana Gr Letterpress, fanontana UV
hetsika fampiroboroboana, fanofanana ary fananganana ekipa, Fanomezana fandraisana, fiverenana any an-tsekoly / fizarana diplaoma, fanomezana fanomezana ara-barotra vaovao, fanomezana amin'ny tradeshow, fanomezana "misaotra", hetsika hafa
ara-nofo ABS, PC
Volavola fanontana namboarina
Haben'ny boaty cartoon
Milanja / boaty
Ireto ny toetran'ny vokatra:
1. Kely ny habeny, azo ahantona amin'ny adaptatera an'ny keychain, azo ahantona amin'ny kitapo, amin'ny keychain, indrindra mety entina, tsy mora adino.
2. Mahafinaritra ny vokatra ary toy ny lakilen'ny fiara ny firafiny. Milamina sy mamiratra ny endrika ivelany.
3. Ny vokatra dia miaraka amin'ny fampisehoana maivana, hazavana ny sary famantarana rehefa miasa.
4. Ny sary famantarana mamiratra dia azo ampiasaina ho jiro amin'ny alina.
Ity vokatra ity dia mety indrindra amin'ny fanomezana fampiroboroboana orinasa ho an'ny manaraka
Ny adaptatera dia lehibe amin'ny habeny, tsy mety amin'ny fanatanterahana, ary tsy mety entina rehefa mandeha. Izahay dia namolavola adapter mamorona izay kely habe, tsara tarehy, ary mety entina. Izy io koa dia manana fiasan'ny jiro amin'ny alina sy sary famantarana mamirapiratra, izay mety indrindra amin'ny fanomezana fampiroboroboana orinasa.
1. Ity vokatra ity dia vokatra mamorona, tokana eto amin'izao tontolo izao. Ireo mpanjifa mahita ity vokatra ity dia hahatonga azy liana be sy ho gaga, ary hamela fahatsapana tsara ho an'ny mpanjifa.
2. Asongadino ny marika, satria eo am-panaovana ny fampiasana azy dia manjelanjelatra ny sary famantarana, mba hahafahanareo sy ny namanao mahita ny sary etsy ambony, mba hahatsiarovan'ny rehetra azy.
3. Ny tahan'ny vokatra dia avo lenta, ary ny adapter dia tsy maintsy ampiasaina isan'andro hanamafisana ny fahatsiarovana isan'andro.
4. Ny vidin'ny vokatra dia ambany, ary zakan'ny mpivarotra, ary ny vokatra manodidina ny 3 dolara amerikana dia mety kokoa amin'ny fanomezana fampiroboroboana.
Teo aloha: Fanomezana napetraka
Manaraka: LED totozy famahanana pad mouse
Notebook misy logo famantarana
hetsika atao amin'ny fampiroboroboana
Fanofanana sy fananganana ekipa